Sajhasabal.com |रासायनिक मल उद्योगमा विस्फोट: ४४ जनाको मृत्यु, ९० जना घाइते
लोकतन्त्र बिरोधि बिधेयक कुनै हालतमा पासहुन दिदैनौ : सभापति देउवा
कांग्रेसले संसदमा असंसदीय,अमर्यादित व्यवहार देखायो : प्रम ओली
संसद अबरुद पछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रम ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बैठक स्थगित
नेपालमा मनसुनि वर्षा सुरु भएपनि देशभर फैलिन केहि समय लाग्ने
आज मलेसिया, दुबई, कतार कोरिया लगाएत विदेशी मुद्राको भाउ कति छ ? हेर्नुहोस
कतारमा मृत्यु भएका श्रीमान्को शव कुर्दै दाङकी सम्झना
काठमाडौंमा गुडिरहेको मोटरसाइकलबाटै युवतीहरूमाथि सिलसिलेबार ‘सिरिन्ज’ आक्रमण
ट्रम्पद्वारा फेरी राष्ट्रपति बन्न औपचारिक रूपमा प्रचार अभियान शुरु
टीकापुर नगरपालिका: २० करोड लागतमा निर्माणाधीन सडकमा बलौटे माटो प्रयोग भएको आशङ्का
भूकम्पका कारण ११ जनाको मृत्यु, जनजीवन प्रभावित
कारागारभीत्र दश जनाको मृत्यु, पाँच जनाको टाउको काटेर हत्या
इन्सेफ्लाइटिसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १०० नाघ्यो, यसको लक्षणबारे जान्नुहोस्
म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूतावासले भन्यो, 'कामदारहरुको न्यूनतम तलब घट्नेगरि कुनै सम्झौता नगर्नु'
नेपाल र मलेसिया बीच श्रम समझदारीको विषय टुंग्याउन एक महिना भित्रै संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्ने
एजेन्टमुक्त बैदेशिक रोजगारमा गम्भीर प्रश्न: १२०० युवालाई कसले ल्यायो काठमाडौँ ?
वैदेशिक रोजगारीमा एक दशकमा ७,३०४ को मृत्यु
रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका पाँच सय ३२ नेपाली विदेशी जेलमा
कियाराले गूगलबाट सिकेकी थिइन् सेक्स भाइब्रेटर प्रयोग गर्न, हेर्नुस ५ रियाक्सन तश्वीर
‘लभ यु हमेशा’ को फस्र्टलुक भदौ ६ मा दर्शकमाझ
रासायनिक मल उद्योगमा विस्फोट: ४४ जनाको मृत्यु, ९० जना घाइते
Posted on: 22 Mar, 2019
चैत ८, चीन | पूर्वी चीनको जिआङसु प्रान्तको याङचेङ जिल्लामा रहेको एउटा रासायनिक मल उद्योगमा ठूलो विस्फोट हुँदा ४४ जनाको मृत्यु हुनको साथै अन्य ९० घाइते भएका छन् । उद्धारकार्यको प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार सो जानकारी दिएको छ ।
यद्यपीमा यस विस्फोटमा परी घाइते भएका करिब ६ सय ४० व्यक्ति उपचारार्थ अस्पताल पुगेका थिए । ती मध्य ३२ जनाको स्थिति गम्भीर रहेको र ५८ जनाको नराम्ररी घाइते भएका बताइएको छ । पाँच सय भन्दा बढी व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
चीनमा केही वर्षमा यता भएका घातक औद्योगिक दुर्घटना मध्येको यो पनि एक भएको बताइएको छ । आगलागी भएपछि भएको विस्फोटको समयमा भूकम्प मापन केन्द्रले २.२ म्याग्निच्युडको कम्पन मापन गरेको भूकम्प मापन निकायले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय समयानुसार बिहीवार अपराह्न २:५० बजे याङ्चेङमा अवस्थित सो उद्योगमा विस्फोट भएको थियो । स्थानीय पत्रपत्रिकाका अनुसार विस्फोटको यति शक्तिशाली थियो कि कारखानाको भवनहरूको भग्नावशेषहरू परसम्म लागेर कामदारहरू घाइते भएका थिए ।
विस्फोट निकै शक्तिशाली भएको र आगलागी शुरू भएको १२ घण्टापछि मात्र आगो नियन्त्रणमा लिइएको चिनियाँ सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ ।
चीनमा यस्ता उद्योगहरुमा सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोर भएको कारण औद्योगिक दुर्घटनाहरू भइरहने पाइन्छ । गत वर्ष नोभेम्बरमा उत्तरी चीनमा रसायन पदार्थ बोकेको एक गाडी दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
गत वर्ष नै जुलाइमा दक्षिणपश्चिमी चीनको एउटा रसायन उद्योगमा विस्फोट हुँदा १३ जनाको ज्यान गएको थियो।
हालैको वर्षको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना भने सन् २०१५ को अगस्टमा भएको थियो जसमा १६० जनाको मृत्यु हुनुका साथै १,००० घाइते भएका थिए।
बिहीवारको दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।